FIAKARAN’NY VIDIN-TSOLIKA : Mitaraina ny mpamily fiarakaretsaka sy mpamily tuc-tuc
“Mangigny managna aretigny zahay” : io no teny nosantarin’ireo mpamily fiarakaretsaka sy Tuc-tuc, manoloana ny fisondrotan’ny vidin-tsolika, raha nitafa tamin’ny mpanao gazety ny solontenan’izy ireo. 2 février 2017
Tao anatin’ny iray volana katroka dia indroa niakatra ny vidin-tsolika hoy izy ireo. Ny voalohany tamin’izany ny andron’ny 1 janoary teo iny ary ny fiakarana faharoa dia izao mihatra izao hatramin’ny fiandohan’ity volana febroary ity.
Tsy afa-manoatra izy ireo. Misy ihany ny fikasana te hampiakatra ny saran-dalana saingy tsy afaka aloha hatreto, hoy izy ireo. Eo ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka, eo ihany koa ny mety ho fanararaotana ataon’ireo tompona fiara natu-tuc hampiakatra ny vola aloa isan’andro na “versement” izany. Manoloana izany dia mitaraina amin’ny Mpitondra fanjakana foibe izy ireo mba hamaha haingana ity olan’ny fampiakarana vidin-tsolika ity, fa lasa izy ireo indray mantsy izao mizaka ny mafy amin’izao vidin-tsolika izao.